टोयोटाको एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न, यस्ता थिए अफरहरु !
टोयोटा कम्पनीले ʻटोयोटा एक्सचेन्ज मेलाʼ सम्पन्न गरेको छ । सो एक्सचेन्ज मेलामा कुनै पनि ब्रान्डका पुरानो गाडी ल्याई उचित मूल्यमा नयाँ टोयोटा गाडी खरिद गर्ने र साट्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।.
विश्व प्रख्यात मोटर कम्पनी टोयोटाको एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता युुनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालीले नेपालममा टोयोटा गाडी बिक्रि बितरण शुरु गरेको आधा शताब्दी पार गरिसकेको छ ।
यस लामो अवधिमा नेपाली ग्राहकको विश्वास जित्न सफल टोयोटा गाडीले समय, परिस्थिति र ग्राहकको चाहना एवं आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी विभिन्न प्रकारका योजना तथा एक्सचेन्ज मेला आयोजना गर्दै आइरहेको छ, यसै योजना अन्तर्गत सो कम्पनिले यहि २०७५ जेठ २६ र २७ गते काठमाडौंको नक्साल बेङक्वेटमा ʻटोयोटा एक्सचेन्ज मेलाʼ भव्यताको साथ सम्पन्न गरेको छ ।
२ दिनसम्म चलेकोे उक्त मेलामा ग्राहकको पुरानो गाडीको सहि मुल्यांकन गरी आवश्यकता अनुसार फाइनान्सको पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त एक्सचेन्ज मेलामा टोयोटा स्पेयर्स पार्ट्स आउट्लेट र टोयोटा जेनियुन एसेसरिज आउट्लेट पनि राखिएको थियो । मेलामा गाडीको निःशुल्क चेकअप, अन द स्पट फाइनान्स, टेस्ट ड्राइभ र अन द स्पट मुल्यांकन जस्ता आकर्षक अफरहरुको पनि व्यवस्था थियो ।
मेलामा पारिवारिक कार्यक्रम रहेकाले मनोरन्जनका लागि विशेस सांगीतिक ब्याण्ड को लाइभ प्रस्तुति, फूड स्टल र विभिन्न थरीका नृत्यहरु प्रदर्शन हुनुका साथसाथै बच्चाहरुको लागि बाउन्सि क्यासटल, फेस पेन्ट जस्ता आकर्षणहरु राखिएको थियो ।
आफ्ना ग्राहक प्रति सधै समर्पित रहदै आएको टोयोटा, समयानुकुल र आवश्यकता अनुरुप यस्ता प्रकारका ग्राहकमुखी मेलाहरु भविस्यमा पनि आयोजना गर्दै जाने कुरा कम्पनीका महाप्रबन्धकले बताए ।
उनले ग्राहकले कम्पनिप्रति देखाएकोे विश्वासले नै यस्ता कार्यक्रम सञ्चाालन गर्न प्रोत्साहित गरेको जानकारी दिदैं मेलामा सहभागी हुने सबै ग्राहक वर्गहरुलाइ हार्दिक आभार व्यक्त गरेका थिए । मेलामा २०० जना भन्दा बढी ग्राहकको सहभागिता रहेको थियो भने १० गाडीे एक्सचेन्ज तथा बिक्रि भएको थियो ।